Maraoka: Miatrika Fitsaràna i Hisham Almiraat Mpikamban’ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2015 2:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, Magyar, عربي, polski, বাংলা, Deutsch, русский, Ελληνικά, Italiano, bahasa Indonesia, English
Hisham Almiraat tao an-trananony ao an-tanànan'i El Jadida, Maraoka Oktobra 2013. Sary an'i Ellery Biddle.
Nandray anjara tamin'ity halatsoratra ity i Claudio Guarnieri.
Hiatrika fitsaràna amin'ity herinandro ity i Hisham Almiraat, dokotera mpitsabo ary efa ela no mpitarika vondrom-piarahamonina tato amin'ny Global Voices. Vesatra iampangàna azy ny “fanohintohinana ny filaminana anatin'ny Fanjakàna”
Voampanga miaraka aminà olona efatra hafa mpiaro ny fiarahamonim-pirenena sivily i Almiraat — i Maâti Monjib mpahay tantara, Samad Iach sy Mohamed Elsabr samy mpanao gazety, ary Hicham Mansouri mpiaro ny fahalalahana maneho hevitra. Miara-miaiky daholo ireo vondrona mpiaro ny fahalalahana maneho hevitra sy ny zon'ny media hoe ireto raharaha ireto dia maneho ny ezaky ny fanjakana Maraokàna hanampina ny vavan'ireo izay manakiana ny politikany sy ny fomba fanaony.
Ireo porofo amelezana an'i Almiraat, izay nanoratra ho an'ny Global Voices nanomboka ny 2009 ary niasa ho talen'ny vondrom-piarahamonina advocacy ny 2012 – 2014, dia ahitàna ilay fijoroany vavolombelona “Their Eyes on Me” – (Aty Amiko Ny Mason'izy ireo), tatitry ny fikarohana iray momba ny fanarahana maso ara-teknika ao Maraoka. Tatitra navoakan'ny ONG “Privacy International” ao Londona, niarahany niasa tamin'ny Association des Droits Numériques (Fikambanana ho an'ny Zo Niomerika), vondrona fiarahamonim-pirenena Maraokàna izay nampian'i Almiraat ny fananganana azy.
Hisham Almiraat, Nighat Dad, Sana Saleem sy Ellery Biddle tao amin'ny IGF 2013 tany Indonezia. Sary natolotr'i Ellery Biddle.
Almiraat sy ilay nàmany Karima Nadir, tale lefitr'ilay Fikambanana, dia nalain'ny Polisim-pitsaràn'i Maraoka am-bavany (BNPJ) tao Casablanca tamin'ny Septambra 2015. Nanontanian'ireo manampahefana azy ireo ny momba ny asany sy ny fifandraisany amin'ny “Privacy International”. Avy eo ny Ministeran'ny Atitany nametraka fitoriana teny amin'ny fitsaràna momba ilay tatitra fanaharana maso ao Maraoka nataon'ilay fikambanana voalaza ery ambony.
Nandany ny ankamaroan'ny fahalehibeazany tamin'ny fiezahana hampivoatra ny fiainana sy ny fiadanan'ny Maraokana i Almiraat, na izany amin'ny maha mpiaro ny fiarahamonim-pirenena azy, na amin'ny maha-dokotera mpitsabo azy. Fony nianatra momba ny fitsaboana ary niasa ho mpitsabo mandray ny vonjitaitra rehefa amin'ny antoandro, nitantana ny bilaoginy i Almiraat, nanoratra ho an'ny Global Voices, ary niaraka nanorina ireo tetikasa fampahalalana vaovao an'olontsotra Talk Morocco sy Mamfakinch. Ity tetikasa farany ity dia i Almiraat sy vondrona iray ahitàna ireo mpiara-miasa aminy mpiaro ny zon'olombelona no nanangana azy, ho ezaka hanamafisana ny fandrakofana ny vaovao momba ireo fitroarana sosialy tao Maraoka tamin'ny 2011-12 ary nitàna toerana be tamin'ny fanetsiketsehana ny fanohanan'ny vahoaka ilay hetsika fanoherana.
Nandritra io fotoana io, Almiraat sy ilay nàmany Mamfakinch dia lasibatry ny fanarahana maso tamin'ny alàlan'ireo rindrambaiko nameno ny solosainan-dry zareo ka nahatonga azy ireo ho raiki-tahotra hoe narahana maso daholo izay fifandraisana nataony. Voamarina ireny tahotra ireny taty aoriana kely, niaraka tamin'ny fikarohana nataon'ny Citizen Lab avy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Toronto. Ny Jolay 2015, ireo antontan-kevitra niporitsaka avy amin’ilay orinasa Hacking Team mpanao rindrambaiko fanarahana maso ao Italia no nampiseho fa tamin'ny 2012 ny Conseil Superieur De La Defense Nationale, masoivohom-panjakana Maraokana no nividy rindrambaiko tamin'ny Hacking Team.
Nandritry ny fotoana rehetra ny asan'i Almiraat dia voalohany indrindra ho an'ny fanohanana ny fanamafisana ny tontolon'ny media ao amin'ny fireneny, ary fitànana ny governemantany ho tomponandraikitra amin'ireo fanekena iraisampirenana nekeny momba ny fenitry ny zon'olombelona amin'ny resaka fahalalahan'ny fanehoana hevitra sy ny fiainana manokana.
Mijoro miray hina amin'i Hisham ny vondrom-piarahamonina Global Voices ary manentana ireo mpamaky manerana izao tontolo izao hanohana azy amin'ity raharaha ity, eny anaty tambajotra sosialy ka hamaky sy hizara ny tantarany, izay afaka jerena eto sy eto. Afaka fotoana fohy dia hamoaka vaovao misimisy kokoa momba ny raharaha izahay, miaraka amin'ny fanambaràna fanohanana ampahibemaso.